गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न : के जित्यौ ? हेक्का राखे हुन्छ माछाले हजारौं फुल चुचाप पार्छ « रिपोर्टर्स नेपाल
गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न : के जित्यौ ? हेक्का राखे हुन्छ माछाले हजारौं फुल चुचाप पार्छ
काठमाडौं, २८ बैशाख । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले माधव नेपाललाई गल्ती सुधार्ने अझै एक अन्तिम मौका रहेको बताएका छन् । तत्काल कारबाही गर्न हतार गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
आज विहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् । माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसद हिजो संसद्मा अनुपस्थित भएका थिए । पार्टीले सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएको थियो । तर, नेपाल पक्षधर सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । यही सन्दर्भमा नेता बाँस्कोटाको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
उनले लेखेका छन्-“कुखुराले फुल पार्दा गाँउ हल्लने गरी हल्लाखल्ला मच्चाचाएझै जस्तो गर्छन त कोही कोही त।के जित्यौ? हेक्का राखे हुन्छ त्यस्ताले,माछाले हज्जारौ फुल चुपचाप पार्छ।माधब नेपाललाई गल्ती सुधार्ने अझै एक अन्तिम मौका छ।कार्वाहीको हतारो किन गर्नु र?चीज आफै किल्लोर हुँदै गईहाल्छ नि भन्या!”